Kajy ny tena ara-nofo-leveling tany
sary sehatra 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sakan'ny trano X
lavany ny efitrano Y
Ny ambany indrindra hateviny F
Kajy ny tena leveling rihana
X - sakan'ny trano
Y - lavany ny efitrano
Mandrefy ny hahavony fahasamihafana eo amin'ny zorony efatra amin'ny efitra, amin'ny hevitra A, B, C, D.
Mba hanaovana izany, mampiasa ny haavon'ny trano.
Nametraka ny kely indrindra amin'ny Inlet sakan'ny tany. Izany habeny dia ampiharina avy hatrany amin'ny ambany indrindra ny hevitry ny efitrano.
Izany dia hanao kajy ny habetsahan'ny fitaovana takiana amin'ny metatra toratelo, ary nametraka ny hahavony amin'ny zoron'ny efitrano.
Program no manao kajy ny habetsahan'ny zavatra ho an'ny tena-leveling tany amin'ny avo fahasamihafana eo amin'ny zorony.
Ianareo dia ho afaka ny marina kokoa kajy ny vidin'ny fitaovana.
Ny tena tombony ny tena-leveling gorodona fa leveling manokana Zavatra, izay ampiasaina ho azy io, mamorona sy malamalama ambonin'ny fisaka tsy misy ezaka avy aminao. Izany no antony mahatonga izany gorodona ankehitriny nahazo laza manokana.
Pour ny gorodona mety ho tsy miankina. Izay rehetra takiana dia ny mahafantatra ny lavany sy ny sakan'ny trano, ny haavony eo amin'ny zorony, sy toy ny fara fahakeliny, hatevin'ny ny voky, ary avy eo dia hanao kajy ny fandaharana ho anareo ny habetsaky ny fitaovana hamenoana ny inclines.
1. Toy izany ny eny amin'ny gorodona mitovy tantana, tsy misy seams sy ny banga.
2. Ny fanompoana ny fiainana ny tena leveling gorodona tonga 40-50 taona.
3. Manao fanoherana.
4. Aza mitaky fikarakarana manokana.
Niisa filler tsotra gorodona tsara tarehy, ka maro ny olona tia ny manao izany ny tenanao tsy nampiarahin'ny ny manam-pahaizana manokana. Fa misy ny sasany saro.
Noho izany, alohan'ny hanombohanao ny fandatsahana ny tany dia ilaina ny manomana ny efitrano. Mba hanaovana izany, manala ny taloha Flooring, baseboards sy ny varavarana. Ambonin'ny tany no rava tanteraka. Izany dia azo atao amin'ny fampiasana milina manokana sanding na tariby borosy. Avy eo, raha misy triatra teo amin'ny tany, dia nilaza mampiasa ny telozoro scraper.
Tadidio fa raha handeha hametraka ny filler teo ambony rihana iray vita amin'ny hazo, tsy maintsy hamafisina amin'ny mialoha manokana Grid.
Dia norefesiny koa ny fampiasana ny tany slats fiolahana. Araka izany fandrefesana natao teo amin'ny rindrin'ny ny marika ho izay ny haavon'ny ny tany no harotsaka. Amin'izao ambony, miampy 2,5 santimetatra, dia nanadio ny rindrina sy ny hafa avy amin'ny stucco fitaovana fahavitany.
Ary ny tany dia nanadio sy degreased indray amin'ny vovoka manokana.
Ary ny tany dia mifanaraka amin'ny vahaolana nohosorana triatra sy tsy fanarahan-dalàna smoothes tsefatsefaky ny vatolampy. Rehefa afaka izany, ny tany tokony ho primed. Ary amin'ny dingana fanomanana izany dia vita. Afaka manomboka nametraka ny gorodona.
Nametraka rihana filler
Mba hameno ny tany handray Assistant mitovy ny anjaran'ny tsirairay izay mametafeta ny vahaolana mandra no hameno.
Manomàna vahaolana araka ny toromarika fonosana. Ny vahaolana dia homogeneous, tsy mameno ny fiara avy hatrany ny rano rehetra. Aoka izany ho ampahany lehibe izany. Mametafeta vahaolana izany. Mba hanaovana izany, dia tsara indrindra ny mampiasa ny herinaratra drill amin'ny nozzle manokana. Ary raha tsy ny vahaolana mampiova ny endriny ho iray homogeneous faobe, aidino ny sisa rano eo anatiny.
Firaisana ara-nofo nilatsaka teo anoloan'ny varavaran'ny trano mankany amin'ny fidirana amin'ny zorony mifanohitra ny efitrano. Ny fifangaroana dia naidina tamin'ny anjara, ny tsirairay rehefa avy aligning ambonin'ny roller mampiasa fanjaitra. Izany dia manampy ny hanala taratra rivotra izay mety ho voafandrika ao amin'ny vahaolana sy manome coating fanamiana.
Anjara iray mipoitra avy amin'ny fotoana hafa dia tsy tokony ho mihoatra ny 10 minitra.
Nandritra ary manahy ny tany, ary izany no ora 3-6 arakaraka ny marika ny vahaolana sy ny tsy drafts tao amin'ny efitrano fiovana mari-pana.